अमेरिकी नागरिकको ज्यान चीनको हातमा ! कसरी बढे अमेरिकामा कोरोना संक्रमित ? – Complete Nepali News Portal
अमेरिकी नागरिकको ज्यान चीनको हातमा ! कसरी बढे अमेरिकामा कोरोना संक्रमित ?
ScotNepal April 7, 2020
पहिलो संक्रमणको घटना सार्वजनिक भएयताका २ महिनामा अमेरिकाभर फैलिइसकेको छ कोरोना संक्रमण। तीन लाखभन्दा बढी अमेरिकी नागरिकमा संक्रमणको पुष्टि भइसकेको छ। ९ हजारभन्दा धेरै अमेरिकी नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
अहिले महामारीको केन्द्र अमेरिका बनेको छ भन्नु अब गलत हुने छै्रन। संक्रमितको तथ्यांकमा अमेरिका अहिले पहिलो नम्वरमा रहेको छ भने चीनभन्दा चार गुणा बढी संक्रमण देखिइसकेको छ।
कोरोना भाइरसको प्रकोप चीनवाट सुरु भएको भए पनि अहिले सबैभन्दा धेरै त्रास अमेरिकामा देखिएको छ। अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा इटाली र स्पेनभन्दा अगाडि छ। सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका अमेरिकी अधिकारीहरु महामारी उच्चतम विन्दुमा पुग्न अझै केही हप्ता वा महिना लाग्ने बताइरहेका छन्। जे भने पनि यो महामारीले अमेरिकी स्वास्थ्य व्यवस्थाको कमजोरीलाई उजागर गरिदिएको छ। यो संकटबाट पार पाउन अमेरिकाले जुन तरिका अपनाएको छ, त्यसले उसका कैयौं कमजोरी उजागर गरिदिएको छ। तर यो अवधिमा विश्वकै ‘सुपर पावर’ का कैयौं राम्रा कुरा पनि बाहिर आएका छन्।
लोकप्रिय सर्जक किरण बाबु पुनको सृजनामा
गायिका निशा केसीले ल्याईन बसन्त थापा
रमेश प्रसाईको श्रीमती बच्चाको आमा बन्दै,पुगिन
अलिफ खान जन्म दिनमा रुदै आए
चर्चित नृत्य निर्देशक शिव बिकको स्वरमा
२०७८ सालको बार्षिक राशिफल
आजको राशिफल बि.सं. २०७८ साल बैशाख
सुन्दै ड,र लाग्दो घटना घट्यो, गाउमा रातिनै गु,ण्डाहरुले गरे सामुहिक...
अपांग छोरो जन्माइस भन्दै तेजेन्द्रले कुटथ्यो, सचिन परियारकी जन्मदिने आमा...
‘द मंगोलियन शो’मा गायक राजुलामासँगै नाच्न र गाउान सकिने
ढुङ्गावाली सुन्दरिको जादुमय स्वर,ढुङ्गा बेचेर छोरिको गायिका बन्ने सपना पूरा...
सुनसरीमा घट्यो सोच्ने नसकिने घटना,१०० जनाले गरे सामूहिक आक्र,मण, पिडितले...
बिचरा ! २० बर्षे युवतीले गरिन यस्तो काम, स्वर सुन्दा...